Iko backlink viewer tool ingandibatsira kuti ndive yakanaka yehutano hwehutano?
Zvakanaka, zvakakonzerwa neuslinks zvinonyanya kuzivikanwa nezvekukosha kwavo kugovera ruzivo rwekutsvaga rusununguko rwevashandi kuburikidza nehuwandu hwewebsite kana bhuroji peji. Kana zviri mukati mehutano, kuva nechimiro chavo chakarongeka zvakanaka kuchabatsira vashanyi chaivo kufamba nenzira yakadzika muzvinhu zvose zviri muchikamu chekusununguka. Hapana chikonzero chekutaura kuti kushanya kwenguva refu kunobhadharwa nemushanyi wese, zvimwe zviito zvinotorwa pamwero, uye humwe hutongi huchapiwa hutsva hunotsvaga (seGoogle pachayo, pamwe ne Yahoo neBing). Zvechokwadi, kumashure kunowanikwa pakati pevatoro vakakwirira vanotonga pamusoro penzvimbo yemazuva ano ye SEO - ladies fascinators for sale in new york. Saka, webhu yako yehutano hwehutano inokosha yekutsvakurudza zvishoma nevana vanoshandisa-vakaratidzwa kumashure ekuona mashizha, handizvo here?
Shandura Link Link muNzira Dzakakwana Dzokudzora
Asi ungawana sei kushanda kwepamusoro kushandiswa kweGoogle's SERPs? Nzira yekuita sei zvakakodzera kushandiswa kwemashure? Chii chauchaita kana chimwe chinhu chichienda? Uye ndezvipi zvirango zvisingatarisirwi, zvingaitika saizvozvo? Uye nei iwe uchifanira kumhanya izvo zvinotyisa shure backlink tsvakurudzo mushure mezvose? Zvakanaka, ndiyo nguva inonakidza inotanga - uye inouya kusarudza kukuru kwezvinhu zvakasiyana-siyana zvemashure ekuona. Uye hongu, vanogona kukubatsira iwe kuvaka nhaurirano yako yakanaka yewebhu. Iko backlink viewer tool iwe unofanirwa kutsvaga mubatsiri wako wepamusoro-wati? Ngatitangei kupenya mukati!
3 Nzira dzekare-Mifananidzo ye "Yakanaka" Link Profile
Tisati tatanga, ngatitangei tive nechokwadi chekutevera nzira idzi zvitatu dzekugadzira zvigadzirwa zvekugadzira kuita " - hapana backlink viewer tool kana imwe sarudzo yekugadzirisa inogona kubatsira nekutanga kwakarurama. Ndicho chikonzero kunze kwekuita zvakanakisisa kudzivisa Black-Hat SEO yakafanana nedenda, unokurudzirwa kuisa pfungwa dzako pane zvinotevera:
Yeuka, zvinyorwa zvinogara zviri mambo, site search optimization. Zvinoreva kuti iwe unogara uchingonamatira kuhutano hwehutano hunopa kukosha-kutanga uye mberi.
Isa zvitsva zvemashure zvinorarama chete mushure mekunyatsoongorora uye kunyatsogadziriswa.
Rega kushambadzira kana kutengana ne backlinks pamutengo wose, uye usamboshandira PBNs.
Waizviziva Zvose Here?
Chii chingave chishamisika kune vese vemuwebice webhusaiti yepaiti ndeyokuti kurega humwe hukama hunosikwa hwakaenzana nehupenyu. Unofunga here kuti uri kuvakira kuitira chinangwa chakanaka? Mushure mezvose, ingano yako yezvino ye web links ingakwanisa kukwanisa kutarisira zvakakwana muSEO? Ngatitei kusiyana-chinhu ndechekuti dzimwe backlink dzakagadzirirwa kupa pachena uye zvizere zvikwaniro zvingawanikwa muSEO. Kunyange zvazvo vamwe vasina uremu chaihwo, kuonekwa nevanowanzo kutsvaga injini sechinhu chakashata uye chisina maturo. Ndezvipiko-pano tiri kupinda muchecheti wakajeka-chaizvoizvo, backlinks zvingangodaro dzinogona kukuvadza, kunyanya kana kushandiswa kwakadaro kusina kunaka kunofungidzirwa kune nguva refu.
Flavor yega yega inofadza
Kuisa muChirungu chisinganzwisisiki, hukama hwakasiyana hwakagadzirirwa kuuya mumararamiro akasiyana-siyana - izvi hazvisi kuti zvibatanidzwa zvose kuendesa (kana kuti inotarisirwa kudarika) kuburikidza nesuo rekudzokera shure kune SEO. Ndiri kureva chinhu chinonzi backlinking chinoshandiswa pakutsvaga kutsvaga PageRank (a. k. a. TrustRank) inonyanya kukosha inyanzvi yematric system yakawanikwa kubva kune 0 kusvika ku10. Kushandiswa kweyi tsanangudzo yekutanga inowanzogamuchirwa kuti ishandure mapeji ose ebhuku rekukosha, kuvimbika, uye chiremera kuva mucherechedzo wakaenzana wezvakarurama.
Saka, ngatitaurire zvakare - zvisati zvaitika, yako "yakanaka" webhutano hwekubatanidza inofanira kuwanikwa chete nekodzero yekudzokera shure. Mukutaura kwe SEO, zvinoreva kuti iwe unofanira kuchengeta kubva paRirectirect uye No-Follow links, kana kuti zvimwe usazvishandise pasina chinangwa chakanaka.
Redirect link inomirira hutano hwemhando dzakanamatira dzinochengetedzwa zvakare pakunyoresa (dzinowanzonyorwa muFPP) - kuti ikuendese kunzvimbo yakatarwa kuburikidza nejiji chekati ), panzvimbo yekubatanidza iwe zvakananga kune chinangwa mune imwe furo.
No-Follow links dzakabatanidzwa neNofollow HTML maonero. Icho chikwata chekubatanidza chiri kure kwazvo kubva mumoyo wepakutanga we hyperlink yakagadzirirwa SEO zvinangwa netsanangudzo. Saka, panzvimbo yekubheja pane SEO, inoshamwaridzana neNofollow inotarisa zvakananga ku URL yechinangwa webhusaiti mune imwechete - kusapa simba kana kutendesa chero. Zvechokwadi, No-Follow links dzakagadzirirwa mutsara wezvikonzero - somuenzaniso, vari kushumira kuti varwise mamwe marudzi ekutsvaga injini spam (kana zvisina kudaro, kudzivirira spamdexing). Izvo zvinoshandiswawo kusiya mukova wakazarurirwa unhu hwevanhu hutsvaga (i. e. , havapfuuri-juice). Nokudaro, kushandisa No-Follow musimboti wekubatanidza kunogona kuva chisarudzo chakanaka, e. g. , zvikurukuru kune avo webmasters uye vadzidzisi vepanzvimbo vanobatanidza nemaune mapeji epepamu nokuda kwechimwe chikonzero.
Smart Pick zvitsva
Zvine zvose zviripo, ngatidzokere kumucheto wekukurukurirana kwedu kwezvino - shanduko re backlink rekuona rinogona kuita sei zvakanakira ma web link? Zvakanaka, izvozvo zvinoenderana. Zvichida nokuti ndakaedza zvinhu zvakawanda zvakasiyana-siyana zvekuongorora kuburikidza negore razvino-nezvose zvavo zvakasiyana-siyana, uye zvinosuruvarisa nzvimbo dzisina simba. Kana ndiri ini, ndakawana zvinotevera zvinonyanya kukosha - Moz Open Site Explorer (Moz), Semalt Analyzer (Semalt), Majestic SEO Toolkit, uye Ahrefs Backlink Viewer / Checker Tool. Zvechokwadi, zvinongova kwauri kuti usarudze-asi ndinomanikidza kuti uedze mumwe nomumwe wavo, kunyanya muchidimbu. Cherechedza, kuti ndasvika pane zvakasarudzwa zvakasarudzwa zvakasarudza zvakanakisisa backlink viewer zvishandiso uye kuita shanduro software - kuongorora kukosha kwemazano avo, maitiro evashandisi vehutano, zvigadziriswe zvezvakakosha zvekusarudzwa, uye zvigumisiro zvekupedzisira, kusanganisira kunyatsonzwisisa kunyanzvi.
Chengetedza Zvinotyisidzira Pamusoro
Kuti ndipedze, ndinoda kukuzivisai zvinyorwa zvakanyanya kuumba mararamiro enyu akanaka ekubatanidza kwewebhu. Ndinoreva kuti usati watarisa hutsva hutsva newachangobva kuonekwa backlink viewer tool, iwe zviri nani kugadzirisa yako kare iko. Iva nekutanga kwakachena - shandisa Google Disavow Tool kuti ubvise zvinhu zvose zvinogona kukuvadza SEO yako sarudzo panguva yakareba, kana kuti zvishoma nekuderedza unhu hwehutano hwako backlink pane imwe nzvimbo. Muchidimbu, kunyange kana iwe uchinzwa chimwe chinhu chine chokwadi pamusoro pewebsite yakananga iwe unobatanidzwa na - tarisira kubvisa chero zvingave zvakakanganisika. Kuita kudaro, shandisa disavow chida che "kutaurira" Google kuti usatarise izvi zvisingaenzaniswi zvisungo iwe uchiri kusava nechokwadi pamusoro, kunyanya panguva. Nenzira iyo, vazhinji vanoita webmasters webmasayenzi vari kushandisa ichi chinhu chakakosha (panzvimbo pevaya vanozivikanwa necheterelink vatidziri zvishandiso) - kungoenda zvakare uye kugadzirisa, kugadzirisa, kana kuti kuita nokukurumidza-kugadzirisa chero zvakapfuura SEO maitiro avo vave vachiramba vachibatisisa zvimwe kufunga.